प्रबिधि तथा बिज्ञान Archives - Nepali in Australia
Category: प्रबिधि तथा बिज्ञान
काठमाण्डाै – अन्तरिक्षमा ९० दिन बसेन तीन चिनियाँ यात्री पृथ्वी फर्किएका छन् । चीनको अहिलेसम्मको लामो मानवसहितको अन्तरिक्ष अभियान सकेर तीन अन्तरिक्षयात्री पृथ्वी फर्किएका हुन् । पृथ्वीभन्दा तीन सय ८० किलोमिटर (दुई सय ४० माइल) माथि रहेको चीनले बनाएको अन्तरिक्ष केन्द्रको टियाहे मोड्युलमा ९० दिन बसेर उनीहरू पृथ्वी फर्किएका हुन् ।चिनियाँ अन्तरिक्षयात्रीहरू न्ये खाइसङ, ल्यु […]
टिकटक, प’ब्जी र फ्रिफायर तुरुन्तै ब”न्द गर्न अदालतको आदेश !
August 21, 2021 EditorLeaveaComment on टिकटक, प’ब्जी र फ्रिफायर तुरुन्तै ब”न्द गर्न अदालतको आदेश !
भिडियो सेयरिङ एप टिकटक र मोबाइल गेम पब्जी तथा फ्रि–फायरमा प्रतिबन्ध लगाउन बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँको सरकारलाई आदेश दिएको छ । बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्ने किसिमका अनलाईन गेम र एपहरु तत्काल प्रतिबन्ध गर्न अदालतले आदेश दिएको हो । अदालतले यस्ता गेम र एपमाथि प्रतिबन्ध नलगाउनुको कारण १० दिन भित्र पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश […]
ग्राहकको सिमबाट का’टिएको १ अर्ब ११ करोड रकम फिर्ता गर्न एनसेललाई निर्देशन
August 21, 2021 autherLeaveaComment on ग्राहकको सिमबाट का’टिएको १ अर्ब ११ करोड रकम फिर्ता गर्न एनसेललाई निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई प्रयोगकर्ताको अनुमति बिना सेवा दिएर लिएको शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको साउन ३२ गते बसेको बोर्ड बैठकले एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणको सो निर्णय शुक्रबार प्रमाणीकरण भएको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले […]
August 20, 2021 autherLeaveaComment on यो हो विश्वकै सबैभन्दा महँगो आइफोन, जसको मूल्य ५ अर्ब भन्दा बढी पर्छ
काठमाडौं । बजारमा विभिन्न खालका मोबाइलहरु पाइन्छ । हामि सबैलाई थाहाँ नै छ, एकउटा मोबाइलको मूल्य १ हजार रुपैयाँदेखि लाख रुपैयाँसम्म पर्ने गर्छ । तर एक लाख भन्दा बढी मूल्य पर्ने मोबाइल सुन्दा जोकोही झस्किन्छ । आज हामि लाखको मोबाइल होइन अर्ब पर्ने मोबाइलबारे जानकारी दिदैछौं । एउटै मोबाइलको मूल्य ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा भन्दा बढी […]
August 19, 2021 autherLeaveaComment on सा’वधान ! झु’क्किएर पनि यस्ता कुराहरू गुगलमा सर्च नगर्नुहोस्
अचेल मानिसहरू सबै भन्दा बढी मोबाइल र ल्यापटपमा भुल्छन् । इन्टरनेटको विस्तारसँगै मानिसहरूमा यो ल’त बसेको हो । त्यति मात्र नभएर उनीहरू मोबाइल तथा ल्यापटपमा विभिन्न सर्च इन्जिनहरूबाट लेखेर तथा भ्वाइसमार्फत आफू अनुकूलका सामग्री सर्च गर्छन् । यसबाट उनीहरूले क्षणिक आनन्द लिए पनि पर्न सक्ने जो’खिमबारे सचेत हुँदैनन् । यसरी पटक-पटक एउटै कुरा धेरै सर्च […]
August 16, 2021 EditorLeaveaComment on सुनले भरिएको उल्का पृथ्वीको नजिक : पृथ्वी भरिकै अमुल्य चीज कहाँ खस्छ ?
काठमाडौ । नासाले एउटा नयाँ उल्कापिण्ड ‘गोल्डमाइन एस्टेरोइड’ पृथ्वीको नजिक आउने बारे विशेष खुलासा गरेको छ । यस उल्कापिण्डको विशेषता यो हो कि यो सुनको खानी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो पनि भनिएको छ कि सुन मात्र होईन, तर यो उल्का धेरै अन्य कीमती धातुहरु ( बहुमूल्य धातुहरु संग क्षुद्रग्रह पूर्ण ) ले भरिएको छ। […]
August 6, 2021 autherLeaveaComment on नेपालमा पब्जी, फ्री फा’यर बन्द हुने सम्भाबना बढ्यो
काठमाडौं– पब्जी, फ्री फा’यर लगायतका गे’मिङ एप्लिकेशनमाथि प्र’तिबन्ध लगाइनुपर्ने माग राष्ट्रिय सभामा पनि उठेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य (सांसद) तारादेवी भट्टले बालबालिकालाई कुलतमा फसाएकाले पब्जी, फ्री फा’यरजस्ता एप्लिकेसनमाथि प्र’तिबन्ध लगाउन् माग गरिन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद भट्टले को’रोना भाइरसको म’हामारीका कारण विद्यालय ब’न्द रहेको बेला बालबालिकाहरु इन्टेरनेटको कु’ल’त’मा फ’स्न थालेको भन्दै […]
July 26, 2021 autherLeaveaComment on आईफोन १२ नै किन्ने कि आईफोन १३ लाई पर्खने ?
काठमाडौं । गत वर्ष मात्रै एप्पलले आईफोन १२ सार्वजनिक गरेको थियो र यही सेप्टेम्बरमा आईफोन १३ (अपेक्षित नाम) पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।केही महिनाभित्रै आईफोनको नयाँ फोन आउने भएपछि धेरै आईफोन मन पराउने प्रयोगकर्तालाई आईफोन १२ किन्ने अथवा आईफोन १३ लाई पर्खने भन्ने दुविधा बढेको छ । हुन त आफ्नो आवश्यकता र इच्छाअनुसार […]
July 8, 2021 autherLeaveaComment on टिकटक अब उमेर अनुसार मात्र चलाउन पाउने, बन्द हुन थाल्यो भटाभट आइडी
काठमाडौ। १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरुका झण्डै ७३ लाख एकाउन्ट टिकटकले बन्द गरिदिएको छ। यो वर्ष सन् २०२१ को पहिलो त्रैमासिकमा टिकटकले बालबालिकाको भनेर आशंका गरिएको भनिएका लाखौँ एकाउन्ट बन्द गरिदिएको हो। यो संख्या टिकटकका विश्वव्यापी प्रयोगकर्ताको संख्याको १ प्रतिशत मात्रै हो। टिकटकको नियमानुसार १३ वर्ष र सोभन्दा माथिको उमेरका व्यक्तिले मात्र टिकटकमा खाता खोल्न […]
July 6, 2021 EditorLeaveaComment on साउन एक गतेदेखि यस्ता मोबाइल नचल्ने
‘अवैध’ रूपमा नेपाल भित्रिएका मोबाइल साउन एक गतेदेखि नचल्ने भएका छन् । यस नियमका कारण विदेशबाट निजी प्रयोगका रूपमा वा उपहार पाएर मोबाइल भित्र्याउनेहरू त्रसित छन् । तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार राज्यलाई राजस्व छलेर नेपाल भित्रिने मोबाइल–सेटलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र यो व्यवस्था लगाइएकाले अरूले डराउनुपर्दैन । आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र राज्यलाई […]